Shiinaha CPL-Coil to Coil Polishing Line warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Zhongshuo
CPL waxaa badanaa lagu dabaqaa ka saarida ciladaha yar yar ee iskuxirka duudduuban ee qoyan ee SS qoyan, helitaanka dhammaynta qurxinta, ie No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Kululeyntu waxay noqon kartaa emulsion ama saliida macdanta. Nidaamka shaandhaynta iyo nidaamka dib u warshadaynta ayaa muhiim u ah khadka dhammeystiran. ZS CPL waxaa loogu talagalay isukeeninta qabow isku-talaabinta ah ee isku-wareejinta laga bilaabo 100 illaa 1600 mm ballac ahaan iyo dhumuc u dhexeysa 0.4 illaa 3.0 mm. WUXI ZS sidoo kale waxay bixisaa CPL qalalan. Suunka cork ayaa la adeegsan doonaa si loo helo dhammaystirka la mid ah ...
CPL waxaa badanaa lagu dabaqaa ka saarida ciladaha yar yar ee iskuxirka duudduuban ee qoyan ee SS qoyan, helitaanka dhammaynta qurxinta, ie No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Kululeyntu waxay noqon kartaa emulsion ama saliida macdanta. Nidaamka shaandhaynta iyo nidaamka dib u warshadaynta ayaa muhiim u ah khadka dhammeystiran. ZS CPL waxaa loogu talagalay isukeeninta qabow isku-talaabinta ah ee isku-wareejinta laga bilaabo 100 illaa 1600 mm ballac ahaan iyo dhumuc u dhexeysa 0.4 illaa 3.0 mm. WUXI ZS sidoo kale waxay bixisaa CPL qalalan. Suunka Cork ayaa lagu dabaqi doonaa si loo helo dhammaystirka la mid ah Scotch-Brite finishing (SB), xawaaraha quudinta ee CPL qalalan waxay noqon kartaa 50m / min ama ka badan.
1. Bixiyaha xalka, ZS waxay bixisaa xariiqa dhameystiran oo ay kujiraan Unwinder, Rewinder, Loading Car, Pinch Roll, Flattener, Crop Shear, Maydhka iyo nidaamka qallajinta, coater PVC. Isla mar ahaantaana waxaan bixinaa Nidaamka Filtration iyo Nidaamka dib-u-warshadeynta, Ururinta Mist, Nidaamka Dagaallada Dabka iyo Mashiinnada Neefta.
2. Xariiq kama jiraan cilado iyo calaamad sheekeysi
3. Xawaaraha khadka illaa 40m / min ugu badnaan.
4. Khadku wuxuu ku habboon yahay wax soo saar 24 saac oo joogto ah
5. Heerka Sare ee Automation-ka, ie Loant Load. Nidaamka Raadinta Shabaqa Shaashadda
6. Howlgal iyo dayactir saaxiibtinimo
Hore: SPL-Sheet to Line Polishing Sheet